China, Yakasarudzika, Hunhu Ballerina tutu, Ballerina koshitomu, Ballet tutu, Adult ballet tutu, Pancake tutu koshitomu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori. - 5
Yakagadzwa muna 1999ï¼ŒFitdance ballet fekitori uyo anozivikanwa indesign, kugadzirwa uye kutengesa kwekutamba kupfeka, uye ane mukurumbira wepamusoro muChinesedance juear indasitiri. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira ballet tutu, masiketi e ballet, leotard yekutamba uye zvimwe zvipfeko. Uye shangu dze ballet, tights dze ballet uye zvimwe zvekuwedzera. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzimwe nyika nenzvimbo dzakadai seoverseasse North America, Russia, Australia, Canada, Japan, South Korea, nezvimwewo uye zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Isu tanga tichipa pekufanotaura mabasa kubva pakagadzwa kambani. Isu tine timu yehunyanzvi ine makore anopfuura makumi maviri ezvakaitika mukugadzira, kugadzira uye kushambadzira. Tinogamuchira sampuli kuti dzigadziriswe.
Dhizaini yekushongedzwa kwaBallet Pancake Tutu kunobva â € œBlue Dazeâ € .Iine: Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri utaridzika kunge wakapfava, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
tutu zvipfeko ballet
Kuratidzirwa kwekugadzirwa kwaTutu Costumes Ballet kunobva â € ambobambooâ € .Iine: Rinestones matombo! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
tsika ballet tutus
Iyo dhizaini yekufemerwa kweCustom Ballet Tutus kunobva - âButterflyâ €. Iyo ine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
Professional Ballet Tutus Kutenga ndeyakakosha ballet performance tutu, ine "Red rose" yekushongedza sechishongedzo. yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.